Lucas Hernandez nwa akụkọ akụkọ na-enweghị ihe ọhụụ
Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Lucas Hernandez nwa akụkọ akụkọ na-enweghị ihe ọ bụla
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara dị ka Lucas. Anyị Lucas Hernandez Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke ndị ọkachamara French ọkachamara na Bayern kpakpando na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ OFF-Pitch (nke a na-amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ rụrụ ọrụ dị mkpa na 2018 FIFA World Cup maka France. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Lucas Hernandez's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere casmụaka Lucas Hernandez - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Lucas François Bernard Hernández. A mụrụ Lucas na ụbọchị Valentine ụbọchị 14th nke February 1996 na Marseille, France.
A mụrụ ya na nne ya; Py Laurence na nna-ya, Jean-François Hernández (nne na nna na-ese n'okpuru).
Lucas sitere na agbụrụ nke football na-etolite na nwanne ya nwoke bụ Theo Hernandez (nke Lucas kwadoro n'okpuru ya) bụ onye dị afọ abụọ na nwata ya ma na-egwuri egwu na Spanish Real, Real Madrid ugbu a.
Lucas ya na nwanne ya nwoke malitere ndu ha na Marseille France n'ihi n'eziokwu na nna ha na-egwu bọl na Olympique de Marseille.
N'ịchọta France mba kwesịrị ekwesị iji nọrọ na achọghị ịkwaga, ụmụ nwoke abụọ ahụ na nne ha nọ na mba ahụ ka nna ha hapụrụ Spain ka ọ gafere na klọb Spanish, Compostela.
Mgbe Lucas dị afọ 4, ya na Theo na nne ha kwagara Spain iji soro nna ha, bụ ndị nọ n'oge ahụ na-egwu egwuregwu Athletico Madrid n'oge ahụ.
Lucas Hernandez Biography - Nkewa nne na nna:
Ọ na-esiri Lucas ike ịnọ na Spen siri ike n'ihi na ọ chọpụtara na ọ dara mbà n'obi n'ihi nne na nna ya nwere nsogbu alụmdi na nwunye. Nsogbu na ezinụlọ Hernandez bịara n'ihi mmetụta dị anya na alụmdi na nwunye.
N'ụzọ dị ịtụnanya, n'otu ụbọchị, Lucas Hernandez papa, Jef, dị ka ndị enyi ya maara ya, jupụtara akpa ya ma were ya na-amalite ndụ ọhụrụ n'ebe ọzọ, ọtụtụ puku kilomita site na Madrid. N'ụzọ dị mwute, ọ hapụrụ ihe nile n'azụ, gụnyere ụmụ ya.
Hụ na ndị mụrụ ya kewara bụ n'ezie oge siri ike nye Lucas. O doro anya, nwatakịrị ọ bụla nke biri site na nkwụsị nke nne na nna ga-ama nke ọma ihe mgbu mmetụta uche miri emi ọ nwere ike ịkpata.
Maka Lucas na Theo, nkewa nke nne na nna nwere mmetụta mmetụta uche na-emetụta ha, mmepe nke metụtara ha ruo ogo mmadụ.
Lucas Hernandez Biography - Ọrụ Nne:
Py Laurence jiri aka ya mee ka Lucas na nwanne ya nwoke, Theo bilie. Mgbe ya na nne ya na-etolite, Lucas na nwanne ya nwoke chọtara na bọlbụ bụ ụzọ si na ọnọdụ siri ike.
Mmetụta na-ejedebe mgbe football na ụkwụ ha si otú ahụ mee ka ha (Lucas na Theo) achọta ndò na na-enye onwe ha nsogbu pụọ na eziokwu nke nsogbu nke ịhapụ nne na nna.
Enweghị nna nna na-eto eto egbochighị ha ịghọ ndị egwuregwu bọọlụ n'onwe ha.
Theo, onye nke nta n'ime ha abụọ, bụ onye mbụ na-adọta uche nke ndị Atlético de Madrid scouts ma gwa ya ka ọ gaa maka ikpe nke ọ gafere na agba agba.
Lucas (na)ihe gbasara okwu a) nwekwara ohere ya na football mgbe ọ dị afọ 11 (dị n'okpuru ebe a).
Lucas malitere bọọlụ agụmakwụkwọ ya na Rayo Majadahonda, otu ndị otu egwuregwu bọọlụ Spanish nọ na Majadahonda, na obodo kwụụrụ ọtọ nke Madrid.
Echiche ya maka igwu otu egwuregwu kpatara nne ya nsogbu na-ekwusi ike na ụmụ ya nwoke abụọ ga-anọkọ. Py Laurence achọghị ịhapụ nkewa ọzọ na ezinụlọ, ya mere na njedebe, ụmụ nwanyị abụọ ahụ na-aga Atlético Madrid.
Hụ ụmụ ya nwoke abụọ na-egwu egwuregwu Athletico Madrid wetara nne ha na ezinụlọ Hernández obi ụtọ.
Lucas Hernandez Bio - Bilie Iji Mara Aha:
Ihe malitere ịdị ka rosier na rosier ka ụmụnne abụọ ahụ nwere ọganihu site na ntorobịa ma mesịa banye n'ọkwá elu.
Mgbe Lucas rutere n'òtù egwuregwu mbụ nke Athletico Madrid, Theo nwanne ya nwoke gbaziri na Deportivo Alavés. Ọ bụ na Deportivo Alavés Theo ka Real Madrid gụrụ akwụkwọ ọzọ wee zụta ya na klọb na 2017.
Oga Theo na Real Madrid wetara nne ya nchegbu ọ bụla n'ihi na ọ hụrụ ụmụ ya nwoke ka ha tozuru oke ilekọta onwe ha ọbụna n'ebe dị anya na-ekewa ha. Oge a, otu nwanyị na-alụghị di nwere obi ụtọ maka ụmụ ya nwoke ka ha na-egwuri egwu maka nnukwu klọb ndị isi na Madrid.
Mgbe obere nwanne ya gara Real Madrid, Lucas kpebiri ịrụsi ọrụ ike iji ciment ya na ogige egwuregwu nke Athletico Madrid bụ nke mere nke ọma ka ọ na-agagharị ma na-agabiga Filipe Luis.
N'ịbụ onye nwere obi ụtọ na bọl na ụkwụ ya, na-eme ihe ike, na ihe dị egwu na ikuku, Lucas dọtara uche nke onye nchịkwa France Didier Deschamps onye na-akpọghị Lucas ka ọ bụrụ ndị otu ndị isi na French ma tinye ya na ndepụta French World Cup nke 2018.
O juru ndị na-egwu football anya ịhụ Lucas ka ọ bụrụ onye na-adịgide adịgide maka France yana otu onye dị mkpa nke otu ihe ịga nke ọma n'egwuregwu asọmpi World Cup nke 2018 FIFA. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nwunye Lucas Hernandez - Amelia Ossa Llorente:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ịgba ọsọ French ọ bụla, enwere nwunye mara mma ma ọ bụ enyi nwanyị.
Dịka n'oge edere ibe a, Lucas ama ọdọ Amelia Ossa Llorente emi ọkọdọhọde ke enye okosobo ye nditịn̄ikọ ke akpa ikọ emi;
“M zutere Lucas na Madrid na ọ bụ ịhụnanya na mbụ n'anya. Amụtara m mgbe ọnwa abụọ gasịrị na ọ bụ ndị ịgba egwu bọọlụ na achọrọ m ịkwụsị n'ihi na echere m na ndị na-agba ọsọ nwere ndụ na-arụsi ọrụ ike ma nwee ọtụtụ ndị nwere mmasị. Emechara m soro obi m wee gaa na mmekọrịta ahụ ”.
Lucas Hernandez na Amelia Ossa Llorente mmekọrịta mmekọrịta:
Tupu alụmdi na nwunye ha, Lucas na Amelia Ossa Llorente nwere otu ihe merenụ nke mechara ha abụọ pụta n'ụlọ ikpe.
Na 3rd nke February 2017 n'ihe dị ka 2: 30am, ndị uwe ojii Spain nwudoro Lucas na-enyo enyo na ọ wakporo enyi nwanyị ya nke ha gbanwere ma merụọ ahụ na nsogbu ahụ.
Amelia gbara akwụkwọ n’ụlọ ikpe megide nwoke ya. Tupu ha apụta n'ụlọ ikpe, Lucas na Amelia Ossa Llorente bụ ndị a gwọrọ na ebe ahụ maka mmerụ ahụ merụrụ ahụ ka ha lụrụ ọgụ.
Onyeikpe ahụ nyere iwu ka ejide ha abụọ, gụnyere ụbọchị 31 nke ọrụ obodo. Ọ bụ ihe jọrọ njọ nke ndị nta akụkọ kpuchiri ya.
Ihe ahụ merenụ Diego SimeoneNzukọ ogbako nke mere ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma.
“N’ezie, enweghị m ihe ọmụma banyere ihe mere,”
Diego Simeone kwuru.
“Ya mere enweghị m ike ikwu okwu banyere ihe m na-amaghị. Anyị agụla ihe, nụkwa ihe, ozi na-abụghị nke gọọmentị na-ekesa. Nke a bụ ọnọdụ anyị nọ na ya. Apụghị m ikwu ihe ọ bụla ọzọ. ”
Nsogbu Ndị Ọzọ, Lovehụnanya maka Lucas Hernandez na Amelia Ossa Llorente:
Ime ihe ike megide ụmụ nwanyị bụ okwu dị oke mkpa nke a na-aghaghị iji kpọrọ ihe na Spain. Iwu mgbochi ahụ nyere Lucas Hernandez nwere ịdọ aka na ntị banyere mkpọrọ afọ 1 ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na mmebi adị.
O doro anya, ụlọ ikpe Spanish nyere Lucas na Amelia Ossa iwu ka ha nọrọ ma ọ dịkarịa ala 500meters site na ibe ha n'ime ọnwa 6.
Nke a bịara mgbe a mara ha ikpe ụbọchị 31 nke ọrụ obodo. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, akụkụ abụọ ahụ mebiri iwu ụlọ ikpe ka ejidere ha n'ọtụtụ nnọkọ ịhụnanya.
Mgbe e mesịrị n'otu afọ ahụ na June, e jidere di na nwunye ahụ na-ele anya na ndị niile hụrụ n'anya na ọdụ ụgbọ elu Madrid na-alọghachite ezumike.
N'oge a, ụlọ ikpe ahụ ga-ekpebi ihe. E jidere Hernandez ma ọ nọrọ awa ole na ole n'ụlọ mkpọrọ.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ, enwetaghị enyi nwanyị ya n'ihi na arụbeghị ọrụ iwu ụlọ ikpe ya.
N'agbanyeghị na amachibidoro ịbanye n'ime Ogwe 500 nke onye ọ bụla na ọbụna na-emebi iwu ụlọikpe, na abụọ kpebiri na-esi Spain na-alụ na Las Vegas.
Dị ka ọkàiwu na-ahụ maka ọha na eze na Madrid si kwuo, Lucas nwere ike ịga mkpọrọ otu afọ n'ihi na ọ naghị erube isi n'iwu iji zere enyi ya nwanyị.
Ọ dabara na Lucas, enwere ya onwe ya pụọ ​​na ebubo ya dịka akụkụ nke iwu Spanish masịrị ya.
Dị ka iwu Spanish si kwuo, ọ bụrụ na onye ahụ eboro ebubo enweghị ndekọ mpụ, a na-akwụsịkarị ikpe na-erughị afọ abụọ.
Lucas Hernandez ghọrọ nwoke nweere onwe ya wee soro nwunye ọhụrụ ya biri mgbe ọ bụla nwere obi ụtọ. Ha abụọ gara Bahamas iji mee ememme ezumike ha.
Ndụ ezinụlọ Lucas Hernandez:
Ịhụ ya na mba otu ndị France na-aza aha ahụ "Lucas Hernandez" ọ naghị amasị onye si Frans.
N'ihi ya, ajụjụ a ma ama bụ; Gịnị bụ obodo Lucas Hernandez? Ezinụlọ Lucas Hernandez sitere na Spanish na-ekele nna ya, Jean-François, onye bụbu onye na-egwu egwuregwu maka egwuregwu Athletico Madrid wee lara ezumike nká na 2002.
Okwu Mmekọrịta Nwanna: Theo Hernandez enwewokwa nsogbu nke mmekọrịta ya na ezinụlọ Hernández nọ na anya nke oké ifufe ahụ.
Na edemede maka ihe ọhụrụ, Theo (dị n'okpuru ebe a) boro ya ebubo na ọ na-awakpo enyi ya nwanyị na Marbella, Spain.
Nke a mere ọnwa ole na ole mgbe nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Lucas, tinyere aka na ihe omume ya na enyi nwanyị mbụ ya na nwunye ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Lucas Hernandez Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.